Nehemiya 13 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
13 Ngaloo mini kwakufundelwa+ abantu incwadi+ kaMoses; ezindlebeni zabantu yaye kwafunyanwa kuyo kubhalwe ukuba umAmoni+ nomMowabhi+ babengafanele beze ebandleni loTHIXO oyinyaniso ukusa kwixesha elingenammiselo,+ 2 ngenxa yokuba bengazange bahlangabezane noonyana bakaSirayeli ngesonka+ namanzi,+ kodwa baqesha uBhileham+ nxamnye nabo ukuba abaqalekise.+ Noko ke, uThixo wethu wasitshintsha isiqalekiso saba yintsikelelo.+ 3 Ngoko kwathi, kamsinya nje bakuba bewuvile umthetho,+ baqalisa ukwahlula+ lonke iqela elingumxube kuSirayeli. 4 Ke kaloku ngaphambi koku, uEliyashibhi+ umbingeleli owayephethe iholo yokudlela+ yendlu kaThixo wethu wayesisalamane sikaTobhiya;+ 5 yaye wamenzela iholo yokudlela enkulu,+ apho babefudula bebeka khona rhoqo umnikelo wokudla okuziinkozo,+ intlaka yokuqhumisa, nempahla nesishumi sokudla okuziinkozo, iwayini entsha+ neoli,+ ababenelungelo kuzo abaLevi+ neemvumi nabagcini-masango, nomnikelo wababingeleli. 6 Ngalo lonke eli xesha ndandingekho eYerusalem, kuba ngonyaka wamashumi amathathu anesibini+ ka-Artashashta+ ukumkani waseBhabhiloni ndeza kukumkani, yaye kamva ndacela kukumkani ukuba ndikhe ndithi tshalala.+ 7 Ngoko ndaya eYerusalem ndaza ndaphawula ububi obabenziwe nguEliyashibhi+ ngokwenzela uTobhiya+ iholo yokudlela kwintendelezo yendlu+ yoTHIXO oyinyaniso. 8 Yaye oku kwabonakala kukubi kakhulu kum.+ Ngoko yonke impahla yendlu kaTobhiya ndayilahlela+ ngaphandle kweholo yokudlela. 9 Emva koko ndatsho ilizwi yaye bazihlambulula+ iiholo zokudlela;+ ndaza ndabuyisela impahla+ yendlu yoTHIXO oyinyaniso, inomnikelo wokudla okuziinkozo nentlaka yokuqhumisa.+ 10 Ndafumanisa ukuba abaLevi babengazinikwanga izahlulo zabo,+ kangangokuba abaLevi neemvumi ezazisenza umsebenzi babaleka, ngamnye waya kumhlaba wakhe.+ 11 Yaye ndawahlaba amadlala+ amasekela-baphathi+ ndaza ndathi: “Kutheni na ingakhathalelwanga nje indlu yoTHIXO oyinyaniso?”+ Ngenxa yoko ndabaqokelela ndawonye ndaza ndabamisa kwindawo yabo yokuma. 12 Wonke uYuda wazisa isishumi+ sokudla okuziinkozo+ nesewayini entsha+ neseoli+ koovimba.+ 13 Ndaza ndabeka uShelemiya umbingeleli noTsadoki umkhupheli noPedaya wakubaLevi ukuba baphathe oovimba; ababephantsi kolawulo lwabo yayinguHanan unyana kaZakure unyana kaMataniya,+ kuba babegqalwa njengabathembekileyo;+ yaye kwakuphezu kwabo ukwabela+ abantakwabo. 14 Ndikhumbule,+ Thixo wam, ngokuphathelele oku, ungazisusi+ izenzo zam zobubele endizenzileyo kwindlu+ kaThixo wam nokulindwa kwayo. 15 Ngaloo mihla ndabona kwaYuda abantu bexovula izixovulelo zewayini ngesabatha+ yaye besizisa amazala, bewakhwelisa+ kumaesile,+ newayini, neediliya namakhiwane+ nalo lonke uhlobo lomthwalo, beyizisa eYerusalem ngomhla wesabatha;+ ndaza ndanikela ubungqina ngabo ngemini yokuthengisa kwabo izixhaso. 16 NamaTire+ ayehlala esixekweni, esizisa iintlanzi nalo lonke uhlobo lwezorhwebo+ yaye ethengisa ngesabatha koonyana bakaYuda naseYerusalem. 17 Ngoko ndazihlaba amadlala izidwangube+ zakwaYuda ndaza ndathi kuzo: “Yintoni na le imbi niyenzayo, nihlambela imini yesabatha? 18 Asiyondlela abenza ngayo ookhokho benu,+ kangangokude uThixo wethu asizisele intlekele,+ kwanakwesi sixeko? Kanti nongeza ukuvutha komsindo nxamnye noSirayeli ngokuhlambela isabatha.”+ 19 Kwathi kamsinya nje akuba amasango aseYerusalem enatyelwe ngamathunzi ngaphambi kwesabatha, ndatsho ilizwi kwaye iingcango zavalwa.+ Ndahlabela mgama ndathi baze bangazivuli de kube semva kwesabatha; yaye ndabeka abanye babalindi bam emasangweni ukuze kungangeniswa mthwalo ngemini yesabatha.+ 20 Ngenxa yoko abarhwebi nabathengisi balo lonke uhlobo lwezorhwebo bachitha ubusuku ngaphandle kweYerusalem kwakanye nakabini. 21 Ndaza ndanikela ubungqina+ nxamnye nabo ndathi kubo: “Kutheni nichitha ubusuku ngaphambi kodonga? Ukuba niyakwenza kwakhona, ndiya kunisa isandla.”+ Ukususela ngelo xesha ukusa phambili abazange beze ngesabatha. 22 Ndahlabela mgama ndathi kubaLevi+ bafanele bazisulungekise rhoqo+ baze bangene, balinde amasango+ ukuze kungcwaliswe+ imini yesabatha. Oku, nako, kukhumbule+ ngenxa yam, Thixo wam, kwaye yiba nosizi ngam ngokobubele bakho bothando obuninzi.+ 23 Ngaloo mihla ndabona amaYuda awayethabathe+ abafazi bama-Ashdode,+ ama-Amoni namaMowabhi.+ 24 Ke bona oonyana bawo, isiqingatha sabo sasithetha isiAshdode, yaye kwakungekho namnye kubo owayekwazi ukuthetha isiYuda,+ koko babethetha ngolwimi lwezizwana ezahlukahlukeneyo. 25 Kwaye ndabahlaba amadlala ndaza ndabaqalekisa+ amanye amadoda abo ndawabetha+ ndaxhwitha iinwele zawo kwaye ndabafungisa ngoThixo+ ndisithi: “Anifanele nibanike iintombi zenu oonyana babo, yaye anifanele nibathabathele oonyana benu okanye nina nayiphi na kwiintombi zabo+. 26 Kwakungekho ngenxa yaba na awathi uSolomon ukumkani wakwaSirayeli wona?+ Yaye phakathi kweentlanga ezininzi kwakungekho kumkani unjengaye;+ kwaye wayethandwa nguThixo wakhe,+ kangangokuba uThixo wamenza ukumkani wakhe wonke uSirayeli. Kwanaye abafazi basemzini bamonisa.+ 27 Kwaye le asinto ingazange iviwe na ukwenza bonke obu bubi bukhulu kangaka ngokungathembeki kuThixo wethu ngokuthabatha abafazi basemzini?”+ 28 Kwaye omnye woonyana bakaYoyada+ unyana kaEliyashibhi+ umbingeleli omkhulu wayengumkhwenyana kaSanebhalati+ umHoron.+ Ngoko ndamgxotha.+ 29 Bakhumbule, Thixo wam, ngenxa yokwenziwa inqambi+ kobubingeleli nomnqophiso+ wobubingeleli nowabaLevi.+ 30 Ndabasulungekisa+ kuyo yonk’ into yasemzini ndaza ndabela ababingeleli nabaLevi izabelo, ngamnye kumsebenzi wakhe,+ 31 nowesixa seenkuni+ ngamaxesha amiselweyo nowentlahlela. Ndikhumbule,+ Thixo wam, ngokulungileyo.+